Isiseko sedatha njengeNkonzo (i-DaaS)
NgoLwesine, Meyi 27, 2010 NgoLwesithathu, Novemba 5, 2014 Douglas Karr
Kwiiveki ezimbalwa ezidlulileyo, bendonwabile ukumamela i-ExactTarget Chief of Operations, uScott McCorkle, ndithetha ngovuselelo lweqonga labo. Ndibhalile kwixesha elidlulileyo ukuba ndiyakholelwa Ababoneleli ngeenkonzo ze-imeyile baye batsibela ukrebe -Kwaye kubonakala ukuba ii-ESPs zokucinga sele zithathele ingqalelo.
UScott wathetha nenjongo ye-ExactTarget yokuba ngu Intengiso yeHub kwiinkampani. Endaweni yokuba uyinjini yokuthumela i-imeyile, i-ExactTarget inyanzelisa ukuba ibe yindawo yokugcina iinkcukacha kubathengi bayo ngezi njongo zilandelayo:
Ukudityaniswa kwedatha kunye nokuFikelela -Kusebenzisa i-API ebanzi, ukwandiswa kwedatha eyomeleleyo kunye nokukhuseleka, iziseko eziluqilima, kunokwenzeka ukuba iinkampani zibambe kwaye zisebenzise i-ExactTarget njengomthombo okhuselekileyo, ohambelana nokugcina idatha yabathengi babo.
Imigaqo yokuBaluleka -Kuba i-ExactTarget ihambisa imiyalezo nge-imeyile, ngelizwi, ngeSMS nangeendaba zosasazo, idatha yokuziphatha inokufakwa, igcinwe kwaye isetyenziselwe ukuphucula ukubaluleka kwemiyalezo kwabo bathengi.
Ukuhanjiswa koNxibelelwano -I-ExactTarget ineenkqubo ezikhawulezayo zolawulo lweposi kolu shishino kunye nemodeli yazo ye-OEM eqhumayo ngenxa yenkqubo yokusebenza. Yongezwe kule Ilizwi, iSMS kwaye, emva kokuthengwa kweCoTweet, mhlawumbi imiyalezo yemidiya yoluntu.
Umlinganiso kuyo yonke into -I-Target ngqo ijonge ukugqibezela isangqa ngokubonelela ngemilinganiselo eyomeleleyo kulo lonke unxibelelwano oluphumayo.
Ukugcina idatha kwakubonwa njengendalo yeSoftware njengeNkonzo Ulawulo loBudlelwane nabaThengi (CRM) iinkonzo, kodwa amanye amashishini ngoku ahamba kweli cala. Umnikezeli wohlalutyo, iWebtrends, usungule eyabo Idatha yeMart Mart, Ukuvumela utsalo olunamandla kunye nokwehla kwezahlulo ezakhiwe ngqo kwimveliso. IWebtrends ineREST ephezulu API Kwaye, kudityaniswa nenjini ekhokelayo ye-Analytics, ukubamba isiseko sedatha yabathengi bakho ngeWebrends kubonelela abathengisi abanobuchule ngezixhobo ezithile ezinamandla zokujolisa kunye nokulinganisa unxibelelwano.
Isiseko sedatha njengenkonzo esungulwe kwiminyaka embalwa edlulileyo kunye nababoneleli abanjengoAmazon kunye noGoogle ababonelela ngezigcino zolwazi ezilula ezibanjelwe efini. Konke kulungile kwaye kulungile, kodwa ngaphandle kwezicelo zokuphakamisa loo datha, imboni ayikhange ibe nokwamkelwa kobuninzi njengaye abantu babecinga ukuba kuya kuba njalo. Uncedo olunalo iinkampani ezinje nge-ExactTarget kunye neWebrends kukuba lubonakalisile unxibelelwano kwaye kubahlalutyi iimveliso sele zikhona phezu I-DaaS.
Nangona bonke aba baboneleli benokudityaniswa okuqinileyo omnye komnye, kubonakala ngathi baya bekhuphisana ukuze babe ngowona mthombo wedatha yabathengi. I-Ecommerce, i-CRM, i-imeyile kunye nabanikezeli be-Analytics bonke baya kuthi batyhalele phambili ekubeni yindawo yogcino zerekhodi kwaye bonke kungekudala baya kubonelela ngeenkonzo zokugcina idatha yakho, ukubonelela ngemiyalezo eyomeleleyo kunye kubahlalutyi idatha yakho. Lowo ungumnikazi wedatha ungumnini womthengi - kunjalo SaaS ababoneleli abatyhala ukuba babe yiDatabase njengababoneleli ngeNkonzo abaza kuqhuma kunyaka olandelayo. Esi sisicwangciso esihle sabanikezeli be-SaaS okoko ukufuduka okanye ukushiya umboneleli wakho kuya kusiba nzima ngakumbi xa sele bebambe idatabase yakho!
tags: umncedisiKhangela myshiftgoogle plus ibhejiIincwadi zentengisouphandoUphando lwezoPhandoUkunika ingxelo kwezentlaloisilumkowpengine